Waa kee xiddiga ka tirsan kooxda Atletico Madrid ee isku diyaarinaya inuu ku biiro Manchester United? – Gool FM
(Madrid) 30 Luulyo 2021. Wargeyska “The Telegraph” ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa soo wariyay in daafaca midig kooxda reer Spain ee Atletico Madrid Kieran Trippier uu diyaar u yahay inuu sugo ilaa dhammaadka suuqa kala iibsiga xagaaga si uu ugu dhaqaaqo Manchester United.
Kieran Trippier oo 30 jir ah, ayaa u dhaqaaqay kooxda Atletico Madrid xagaagii 2019, isaga oo kaga soo dhaqaaqay naadiga Tottenham Hotspur, waxaana lagu qiyaasay aduun dhan 22 million euros.
Laakiin ninka reer England ee Kieran Trippier ayaa doonaya inuu markale ku laabto dalkiisa hooyo, si uu ugu biiro Manchester United, oo xiiseyneysa inuu ka mid noqdo safka kooxdeeda.
Wargeyska ayaa intaa ku daray in Manchester United ay dooneyso inay la soo wareegto daafaca Atletico Madrid, laakiin isla waqtigaas waxay u baahan tahay inay iibiso in ka badan hal ciyaaryahan marka hore si ay u maalgeliso heshiiska, gaar ahaan ka dib markii ay ku qarashgareysay 120 million pounds heshiisyada Jadon Sancho iyo Raphael Varane.
Wargayska ayaa tilmaamay in dhibaatada jirto ay tahay, in Atletico Madrid ay codsaneyso qiimo dhan 30 million pounds, si ay uga iibiso Kieran Trippier kooxda Manchester United, inkasta oo ay taasi jirto hadana laacibku wuxuu diyaar u yahay inuu muujiyo dulqaad si loo ogolaado heshiiska iyo fursada ugu fiican ee lagu dhameystiri karo.